သမီးလေးရေ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » သမီးလေးရေ…
Posted by johnnydeer on Feb 19, 2013 in My Dear Diary | 22 comments
သမီးလေးက အခု ငယ်သေးတယ်နော်…စာလဲ မဖတ်တတ်သေးဘူး…ဒါပေမယ့် သမီးလေး သိတတ်တဲ့ အချိန်…အရွယ်ရောက်တဲ့ အချိန်ဆိုရင် ဖတ်ဖို့ ဖေဖေရေးထားတာပါ…သမီးလေး အရွယ်ရောက်လာရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖေဖေတို့က မမှားသင့်တာ မမှားရအောင် ပြောဆိုဆုံးမရတော့မယ်…ဆူသင့်ဆူထိုက်ရင်လဲ ဆူရတော့မယ်…သမီးလေးကောင်းဖို့ ဆူရ..ပြောရမှာပါ သမီးလေးရေ…ဖေဖေကလဲ ဘယ်ဆူချင်မှာလဲ နော်…အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင် သမီးလေးက တချိန်လုံး ဆူနေတာပဲ…မချစ်ကြဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီး ဖေဖေ့ကို စိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်…အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ ဒီစာကို ဖတ်ပါ သမီးလေးရေ…သမီးလေးကို ဖေဖေ ဘယ်လောက်တောင်ချစ်သလဲ ဆိုတာ ရေးထားတာပါနော်…
သမီးမေမေ..သမီးလေးကို ကိုယ်ဝန် စရှိတော့ နှစ်ဖက်စလုံးက မြေးဦး…ဖေဖေတို့ကလဲ သားဦးဆိုတော့ တအားပျော်ကြတာပေါ့…ဖေဖေတို့က ညီအကို နှစ်ယောက်ဆိုတော့ အရင်ထဲက ညီမလေးတစ်ယောက် တအားရချင်ခဲ့တာ…ဒါပေမယ့် မရခဲ့ဘူး…အဲ့တော့.ဖေဖေက မွေးတဲ့ ကလေးလေးကို သမီးလေးဖြစ်ပါစေလို့ ကြိတ်ဆုတောင်းခဲ့တယ်…ဘယ်တော့မှ ဆုတောင်းမပြည့်ခဲ့တဲ့ ဖေဖေက ဒီတခေါက်တော့ ဆုတောင်းပြည့်ခဲ့တယ်…သမီးလေးရေ…အာထရာဆောင်းရိုက်ကြည့်ကတည်းက မိန်းကလေးတဲ့…ပျော်လိုက်တာ…ဒါပေမယ့် အာထရာဆောင်းမှာ မိန်းကလေးဆို သိပ်မသေချာသေးဘူးတဲ့…ယောင်္ကျားလေးလဲ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ အပြည့်အ၀တော့ မပျော်အားသေးဘူးပေါ့…ဒါပေမယ့် သမီးလေး နာမည်ကို ဘယ်လိုပေးရမလဲ…ဘာလေးဆို ခေါ်လို့ကောင်းမလဲ ဆိုတာတော့ စိတ်ထဲကနေကြိတ် ရွေးနေမိပြီ…
အိုဂျီက ဇွန်လလယ်လောက် မွေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့သမီးလေး ကျောင်းတက်ဖို့အတွက် အတော်ပဲပေါ့ဆိုပြီး တွေးမိသေးတယ်…ဇွန်လ တစ်ရက်နေ့ကြီး မနက် ရှစ်နာရီလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်…သမီးမေမေ က အောက်ကနေ ရေတွေထွက်လာပြီဘာဖြစ်တာလဲ မသိဘူးဆိုပြီး အလန့်တကြားနဲ့အော်လိုက်တော့ သမီးဖွားဖွားတို့က ရေမွှာပေါက်ပြီထင်တယ်…ဆေးရုံပြေးဆိုပြီး အထူးကုဆေးရုံ ပြေးကြရတာပေါ့…တော်လိုက်တဲ့ သမီးမေမေနော်…သူနာပြုတက္ကသိုလ်ကကျောင်းပြီးလို့တာ တော်တော့တယ်…ဆေးရုံမှာ မွေးရင် ကလေး အသားဝါကူးတတ်တယ်ဆိုလို့ အပြင်ဆေးရုံမှာမွေးတာနော်…ဆေးရုံကြီးက ဖေဖေ့တို့အမျိုး အစိမ်းဝတ် ဆရာမကြီးကတောင် သူ အိုဂျီဝပ်မှာ တာဝန်ကျနေတာတောင် လာမမွေးလို့ဆိုပြီး ပြောနေသေးတယ်…
မနက်ရှစ်နာရီကစ ဗိုက်နာလိုက်တာ သမီးမေမေ တနေကုန်ပါပဲ…ညနေ ငါးနာရီလောက်ကျတော့ တအားနာလာပြီလေ…ည ၇ နာရီလောက်ရောက်တော့ သမီးမေမေ နာလွန်းလို့ အော်တောင်မအော်နိုင်တော့ဘူး…ဖေဖေတို့လဲ မကြည့်ရက်တော့လို့ အပြင်ထွက်နေလိုက်တယ်…ညရှစ်နာရီလောက်ရောက်တော့ မွေးခန်းဝင်သွားကြတယ်…ဖေဖေကတော့ အပြင်ဘက်မှာ ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက်နေရတယ်…ည ၉ နာရီလောက်ရောက်တော့ ကလေးငိုသံလေးကြားလိုက်တယ်…ဟော…မွေးပြီထင်တယ်ပေါ့…ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်ဘူး…မွေးခန်း ကို ဟိုအပေါက်က ချောင်းကြည့်လိုက် ဒီအပေါက်ကချောင်းကြည့်လိုက်ပေါ့….၉ နာရီခွဲလဲ ထွက်မလာ…၁၀ နာရီ မတ်တင်းလဲ ထွက်မလာ…ဘာများဖြစ်နေပြီလဲပေါ့…အင်္ဂါများမစုံလို့လား ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုပြီး စိုးရိမ်လိုက်ရတာ…လူလဲ ထူပူနေပြီးနှလုံးခုန်သံဆိုတာ တဒိန်းဒိန်းနဲ့ နှလုံးတစ်ခုလုံးပေါက်ထွက်တော့မလားထင်မိတယ်…ဖေဖေ့ဘ၀ရဲ့ အကြာဆုံး အချိန်ပေါ့…ဆယ်နာရီကျော်မှ ဆရာမတစ်ယောက်ထွက်လာပြီး မိန်းကလေးပါ…အင်္ဂါလဲ စုံပါတယ် ဆိုမှ သက်ပြင်းအကျယ်ကြီးချနိုင်တော့တယ်…သံယောဇဉ်မီးများ တယ်ပူတာပါလား လို့ သူများပြောတာ တကယ်ပါလားနော်…မြင်တောင်မမြင်ဘူးသေးတဲ့ သမီးလေးကို စိုးရိမ်လိုက်ရတာ…
မွေးခန်းထဲကထွက်လာတော့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ချစ်စရာလေးနော်…မျက်လုံးလေး နှုတ်ခမ်းလေးတွေများလှလိုက်တာ…တော်သေးတာပေါ့နော်..ဖေကြီးနဲ့ မတူပဲ အသားဖြူဖြူလေးမို့လို့…မွေးပြီး သုံးရက်လောက်ရောက်တော့ ဆေးရုံ ဆင်းရတယ်…နောက်နှစ်ရက်လောက်ရောက်တော့ သမီးလေး မျက်လုံးလေးတွေ ၀ါနေသလိုပဲ…အဲ့ဒါနဲ့ မွေးခဲ့တဲ့ ဆေးရုံပဲ ပြန်သွားပြိး အရင်ကြည့်တဲ့ ကလေးအထူးကုနဲ့ပဲ ပြန်ပြတယ်…သမီးမေမေကို စိတ်မချတာနဲ့ ဖေဖေကိုယ်တိုင် အခန်းထဲ ၀င်ပြီး …ဒေါက်တာ သမီးလေးက မျက်လုံးတွေ ၀ါနေသလိုပဲ…သေသေချာချာ ကြည့်ပေးပါဦးဆိုပြီး ၀င်ပြောသေးတယ်…အဲ့ဒိ အထူးကုက အနှီးထုပ်ကလေးကို တချက်ပဲဖွင့်ကြည့်ပြီး မ၀ါဘူး…မ၀ါဘူးဆိုပြီး နောက် သုံးရက်နေတခေါက်လာပြဆိုပြီး ချိန်းလိုက်တယ်…နောက်နှစ်ရက်လောက်ရောက်တော့ တော်တော် ၀ါနေပြီ…သုံးရက်ပြည့်အောင် မစောင့်နိုင်တော့ဘူး…ထပ်သွားပြတယ်…ဆရာဝန်ကို စောင့်ရင်း တအားကြာလာတာနဲ့ ဒီအတိုင်းဆို မဖြစ်တော့ဘူး…ဆရာဝန်ပြောင်းမှ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး နောက် ကလေးအထူးကုတစ်ယောက်ဆီ ပြေးကြရတယ်…
နောက်ဆရာဝန်က တချက်ပဲကြည့်တယ်…ကလေးအတွက် တအားအရေးကြီးတဲ့ အချိန်ရောက်နေပြီ…မိနစ်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်း အရေးကြီးနေပြီ…ချက်ချင်းဆေးရုံတင်ပါ…အိမ်တောင် မပြန်ပါနဲ့ ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ မျက်စိကိုပြာကနဲ ဖြစ်သွားတာပဲ…ချက်ချင်း ဆေးရုံပြေး…ရောက်ရောက်ချင်းပဲ ဆရာမတွေက ကလေးကို ဆေးသွင်းဖို့ သွေးကြောရှာ…ဘယ်လိုမှ ရှာမတွေ့ဘူး…အပ်ကလေးနဲ့ ဖောက်ကနဲဖောက်လိုက် သမီးလေးက ငိုလိုက်..ထပ်ဖောက်လိုက် ထပ်ငိုလိုက်နဲ့ ဘယ်လိုမှကြည့်ရက်စရာမရှိဘူး….ခြေထောက်ကော…လက်နှစ်ဘက်ကော အပေါက် အပေါက်တွေ ဖြစ်အောင် ဖောက်ပြီးမှ တွေ့သွားပြီတဲ့…တော်သေးတာပေါ့…ငါ့ သမီးလေး မနာတော့ဘူးလို့ တွေးကာရှိသေးတယ်…မပြီးသေးဘူးတဲ့…အ၀ါရည် တိုင်းဖို့ ထပ်ဖောက်ရဦးမှာတဲ့…ဆရာဝန်ပေါက်စကလေးက သမီးလေး ခြေဖ၀ါးကို တင်းအောင်ဆုပ်ပြီး အပ်နဲ့ တချက်ဖောက်လိုက်တယ်…သမီးလေး ငိုလိုက်တာ…သွေးကို ညှစ်ထုတ်တယ်…ထွက်မလာဘူး…အဲ့ဒါနဲ့ နောက်ခြေထောက်ပြောင်း..ဒါလဲမထွက်ဘူး…မထွက်တော့ အပေါက်ကို ကျယ်သွားအောင် ပတ်ပတ်လည်ထပ်ဖောက်နေလိုက်တာ…ဘယ်လိုမှ မကြည့်ရက်တော့ဘူး…အသဲကို အပ်နဲ့ထိုးတယ်ဆိုတာ ဒီလိုလားလို့တောင် တွေးယူရတယ်…သမီးမေမေလဲ ငို…ဖေဖေဆိုတာ မျက်ရည်တွေ ဘယ်လို ကျလာသလဲ မသိဘူး…ဒီလောက်လူတွေအများကြီးရှေ့မှာ ငိုချလိုက်တယ်..သူများတွေကတော့ အထူးတဆန်းပေါ့…အဖေလုပ်တဲ့ သူက ငိုတယ်ဆိုတာ…ဖေဖေကတော့ ရှက်မနေနိုင်ပါဘူး…ကိုယ့်သမီးလေး ဝေဒနာ ခံစားနေရတာပဲ မကြည့်ရက်တာပါ…
ဆေးသွင်းဖို့ သွေးကြောရှာလိုက်…အ၀ါရည်တိုင်းဖို့ သွေးဖောက်လိုက်နဲ့ နောက်တော့ ဘယ်လိုမှ မကြည့်ရက် မကြားရက်လို့ သွေးဖောက်တော့မယ်ဆို အဝေးကြီးကို လမ်းလျှောက်သွားနေလိုက်တော့တယ်…အဲ့ဒီနောက် အ၀တ်မျက်မှန်လေးတပ်…မှန်ပြားပေါ်မှာ ကိုယ်တုံးလုံးလေး အပေါ်မီးပြောင်း အောက်မီးပြောင်းနဲ့ သမီးလေး ဘယ်လောက်တောင် ပူလိုက်မလဲကွယ်…သမီးခံစားနေရတာတွေ ဖေဖေလေ အကုန်လုံးယူလို့ရရင် ယူပစ်လိုက်ချင်တယ်…ညရောက်တော့လဲ သမီးလေး ၁၁ နာရီလောက်ကစပြီး ငိုလိုက်တာ…တရစပ်ပဲ လက်တွေကွေးကောက် ခြေတွေကွေးကောက်ပြီးကို ငိုတာ…ဖေဖေကတော့ ဘယ်သိမလဲ…သမီးလေး ဝေဒနာတွေများ တအားခံစားနေရပြီလား..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…ဆရာဝန်တွေခေါ်တော့လဲ ညဂျုတီကျတဲ့ ဆရာဝန်တွေကော..ဆရာမတွေကောက အသစ်ကလေးတွေ…ဘာမှလုပ်မပေးတတ်ဘူး…ဆေးရုံကနေ ဒီအတိုင်း ပွေ့ချီပြီး မန္တလေးပဲ ညတွင်းချင်းပြေးရမလား…ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…သမီးလေးက ဗိုက်ကြီးတအားပူနေပြီး တအားကြီးကို ငိုနေပြီ…နောက်ဆုံး ဆရာဝန်မလေးက နှာခေါင်းထဲ ပိုက်ထဲ့ပြီး အစာကို စုပ်မလို့တဲ့…ပိုက်တွေ ယူလာပြီ…ကလေးလေးက သေးသေးလေးရှိသေးတာ..ဘယ်လိုလုပ် ဒီလို လုပ်လို့ဖြစ်ပါ့မလဲ…သမီးလေး ကံကောင်းတယ်….ပိုက်ယူလာပြီး သမီးလေးနားရောက်ခါနီးမှ ဆီးတွေ ၀မ်းတွေ ဗုန်းကနဲထွက်ပြီး အငိုတိတ်သွားတယ်…တော်သေးတာပေါ့နော်…ဖေဖေတို့ကလဲ သမီးဦးဆိုတော့ အတွေ့အကြုံမရှိတာတွေလဲပါပါတယ်…လေနာတာ..၀မ်းမသွားတတ်တာတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ဖေဖေတို့ မသိတာလဲ ပါပါတယ်…၁၀ ရက်လောက်ဆေးရုံတက်လိုက်ရတယ်…ပထမ ကလေးဆရာဝန်သာ ဖေဖေပြောတုန်းက သေသေချာချာ ကြည့်ပေးခဲ့ရင် သမီးလေး ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်…အဲ့ဒီဆရာဝန်မကတော့ သိမှာမဟုတ်ဘူး…ဖေဖေကတော့ လမ်းမှာတွေ့ရင် ကားနဲ့ပဲ ပြေးပြေးတိုက်လိုက်ချင်တယ်…ဖေဖေ..ငါ့ သမီးထိ ဒါးကြည့်ဆိုသလိုများဖြစ်နေပြီလား မသိဘူး…
ည ည လေနာရင်လဲ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ…သမီးလေးကို ပခုံပေါ်တင် ပြီး တညလုံးလမ်းလျှောက်သိပ်…သမီးလေး မအိပ်မချင်း တညလုံးမအိပ်ရပါဘူး သမီးလေးရယ်…ဆောင်းတွင်းရောက်ပြန်တော့လဲ နှာတွေစီး နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အသက်ရှုမ၀တော့ တညလုံးငို…ဖေဖေနဲ့မေမေ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး…ဖေဖေဆို တအားရွံတတ်တာ…ကျောင်းတက်တော့ အဆောင်မှာ မျက်နှာသစ်..သွားတိုက် သူများလို အများသုံးရေကန်မှာ ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး…ရေသန့်ဘူးကြီးသတ်သတ်ဝယ်ပြီး ရေသန့်နဲ့ မှ သွားတိုက် မျက်နှာသစ်လုပ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေကတောင် ၀ိုင်းသြဘာပေးတာခံခဲ့ရတဲ့သူပါ…ကုန်ကုန်ပြောမယ် သမီးရယ်…သွားတိုက်ဆေးတောင် သူများနဲ့ အတူတူ သုံးရရင် နည်းနည်းညှစ်ထုတ်ပြီး အပြင်ကို တောက် ထုတ်တတ်ပါတယ်…အဲ့ဒီ သွားတိုက်ဆေးက သူများသွားပွတ်တံနဲ့ ထိပြီးသားအပိုင်းမို့လို့လေ…အဲ့ဒီလောက်အထိ ရွံတတ်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် သမီးလေး နှာခေါင်းပိတ် အသက်ရှုမရပဲ ပါးစပ်ကလေး ဟတ်ပဲ့ ဟတ်ပဲ့ နဲ့ ရှုနေရတာမြင်တော့ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်ဘူး…ဖေဖေကောမေမေကော သမီးလေး နှာခေါင်းကို ပါးစပ်နဲ့ တေ့ စုပ်ကြရတယ်…ပိတ်နေတဲ့ နှပ်ချီးဖတ်တွေထွက်လိုထွက်ညားပေါ့…ဒီလောက်ရွံတတ်တဲ့ ဖေဖေလေ…သမီးလေးကိုတော့ ဘာမှ မရွံနိုင်ဘူး…သက်သာလိုသက်သာညား ကြံမိကြံရာပေါ့….၅၂၈ အချစ် ဘယ်လောက်ကြီးသလဲဆိုတာလေ…
ဖေဖေက လောင်းကစားသမားပါ…ပေါက်တတ်ကရတွေလဲ တွေးတတ်တယ်…တအားလဲ အစိုးရိမ်ကြီးတတ်တယ်…သံယောဇဉ်လဲ တအားများတတ်တယ်….သမီးမေမေတောင် လောင်းကစားနဲ့ သူနဲ့ ဘယ်သူ့ကို ချစ်လဲ မမေးရဲဘူး…ဖေဖေက ဘာပြောမယ်ဆိုတာ သိလို့…ဒါပေမယ့် သမီးလေးရေ…ဖေဖေတွေးမိတယ်…တကယ်လို့များပေါ့…ဖေဖေက လောင်းကစားတွေ လုပ်…အကြွေးတွေတင်…မတော်တဆများ…သမီးလေး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အဖေတစ်ယောက်ယောက်ဆီမှာများတင်ခဲ့လို့ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း စကားနိုင်လုကြရင်း နင့်အဖေက ငါ့အဖေဆီမှ အကြွေးတွေတင်နေတယ်လို့များ သမီးလေး အပြောခံခဲ့ရရင် ဆိုပြီး တွေးမိတယ်..ဖေဖေဒီလိုတော့ အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး….ဖေဖေ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တဲ့ဘက်ကို လောင်းနေရတာ တအားကြိုက်တယ်…ဒါပေမယ့် ဒီလောင်းကစားကိုမဖြစ်မနေဖြတ်မှ ရမယ်…သမီးလေးအတွက် …သမီးလေးမျက်နှာမငယ်ဖို့အတွက်…
သမီးလေးကို ဖေဖေပြောချင်တာတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်…ဖေဖေထပ်ရေးဦးမယ်နော်…သမီးလေး အရွယ်ရောက်လို့ ဖေဖေနဲ့မေမေကို စိတ်ဆိုးခဲ့ရင်…ဖေဖေက သမီးကို မချစ်တော့ဘူးလို့ ထင်ခဲ့ရင် ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါနော်…ဖေဖေ သမီးလေးကို ဘယ်လောက်တောင်ချစ်သလဲဆိုတာကို…
johnny deer has written 76 post in this Website..
၇၇မွေး...၉၄ ဆယ်တန်းအောင်..၂၀၀၂ မန်းလေးစက်မှုတက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ဆိုတဲ့ စာရွက်ကလေးတရွက်ရ...ဘာပညာမှမတတ်..အခုလောလောဆယ်တော့ပေါက်တတ်ကရပြော.. .ပေါက်တတ်ကရရေးနေပါတယ်...ရေးသမျှ အားလုံးကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးစစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်း ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ်...များသောအားဖြင့်တော့ သူများမကောင်း ကိုယ်ကောင်းကြောင်း ကိုယ်ရည်သွေးစာတွေ ရေးတတ်ပါတယ်...ဒါပေမယ့် အထင်ကြီးစရာတော့ တကွက်မှမရှိပါဘူး...
View all posts by johnnydeer →
သမီးလေးပုံနဲ့ တွဲတင်တာ ဘာလို့ သမီးလေးပုံက ကျန်တာလဲ မသိဘူး…ပြောပြကြဦး…
နယ်လှည့် ၀ိဇ္ဇာ mobile (သူကြီးသမက်) says:
သမီးလေးပုံကို ရွာထဲဂ နှာဗူးတွေကြည့်မှာစိုးလို့ ကျန်နေခဲ့တာနေမှာပေါ့ဗျာ။
ရွာထဲမှာ ယောက္ခမတွေ ယောက္ခထီးတွေကလည်း ပေါးလိုက်တာပါလား
ဘယ်သူ့ကို ယောက်ခမတော်လို့ တော်ရမှန်တောင်မတိဒေါ့ဘူး…….
ပုံက.. အထဲမှာရှိနေပေမယ့်.. Insert မလုပ်လို့ထင်ရဲ့.. မပေါ်တာ.. ကျုပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
အေရှန်းကလေးတွေ.. အသားဝါတာ ပုံမှန်လို့တောင်ပြောရမယ်ထင်တယ်..
No one can predict with certainty whetheranewborn will develop jaundice, but Asian and Native American babies tend to have higher bilirubin levels than white …
အသက်ရူခက်တာ.. လေခိုနေလို့.. နာတာ..အောင့်တာ.. အကုန်ပုံမှန်လို့.. ထင်မိပါတယ်..
ကျုပ်က..ကလေးချွဲပိတ်ပြီး.. အသက်ရုခက်နေရင်.. ဆေးရုံကပေးလိုက်တဲ့..ပြွန်.. လေဘော်လုံးကလေးနဲ့..စုတ်ထုတ်ခဲ့ရတာပါ..
အဲဒါ.. နောက်ပိုင်း အသိတွေထဲကကလေးမွေးရင်.. ၁၀ဒေါ်လာလောက်ပေးရတဲ့ နှပ်ချေးစုတ်တဲ့. ဓါတ်ခဲနဲ့.. စက်ကလေးဝယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးတယ်..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဖခင်အချစ်စိတ်ကလေး.. မြင်သွားအားပေးသွားပါတယ်လို့.. နော..။ :528:
အောက်ကဆောင်းပါးလေးတွေမိလို့.. မီးမီးသားသားတို့ မိဘတွေအတွက်ပါ.. ပေါ့လို့တော့ မရဘူးလို့ ဆိုပါကြောင်း…။
မွေးကင်းစကလေး နဲ့ အသားဝါရောဂါ
မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တွေ အသားဝါဖြစ်တဲ့ အနေအထား မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုရှိနေပြီး၊ ဒီရောဂါက ဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲ။
ဒီ ရောဂါကို အချိန်မှီ မကုသနိုင်ရင် အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်တာနဲ့ ဦးနှောက်ထိခိုက်ပြီး မသန်မစွမ်းဖြစ်တာ၊ နားမကြားတော့တာတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အထိ အန္တရာယ် ကြီးနေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အချိန်မှီ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း ပြသနိုင်ရင်တော့ အခုလို အန္တရာယ်ကြီးတာတွေ မဖြစ်ရအောင် လွယ်လွယ်ကူကူ ကုသပေးနိုင်တာကြောင့်၊ စောစောစီးစီး သိနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လို ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ကြိုသိထားသင့်ပြီး၊ စောင့်ကြည့်ပေးဖို့လိုပါသလဲ စတဲ့ အချက်အလက် အကြောင်းအရာများကို သိရှိနိုင်ဖို့ ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရဲ့ ကလေးကျန်းမာ/ပညာဌာန ဌာနမှုး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာစောဝင်း နဲ့ ကိုဝင်းမင်း တို့ ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
P chogyi says:
သဂျီးရေ သမီးလေးကြီးလာရင်ဖတ်ဖို့ သေသေချာချာ သိမ်းထားပေးလိုက်ပါနော်။
ကျွန်မ လဲ ငယ်ငယ် က နှာခေါင်းပိတ် လေ့ရှိပါတယ်။
အဖေက အမြဲဒိုင်ခံ ပါးစပ်နဲ့ တေ့ စုပ်ပေးရတယ်။
ကလေးငယ်ငယ် တိုင်း ဒီလိုပါဘဲ။ သိတ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
သမီး ကို ချစ်တဲ့ အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို တလေးတစား ရင်နဲ့ ခံစားဖတ်သွားပါတယ်။
ဒါထက် ကျွန်မ အတော်လေးကြိုက်တဲ့ ဂူးဂဲလ် ကြော်ငြာ လေး ကြည့်ဘူးကြမလားမသိဘူး။
Dear Sophie တဲ့။
ကလေးငယ်တုန်းက ပုံတွေ ပြန်ကြည့်ရင် ရင်ထဲမှာ ဘာမှန်းမသိ လွမ်းတယ်။
ကော်မင့် တွေမများခင် ကြိုပြီး ကော်မင့် လိုက်မယ်။
ဖခင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့်ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ သားသမီးပေါ် ထားတဲ့ 
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဒီပိုစ်ဖတ်ပြီး ခံစားလိုက်ရတယ်။
” ကလေးကို ဆေးသွင်းဖို့ သွေးကြောရှာ…ဘယ်လိုမှ ရှာမတွေ့ဘူး ”
အဘ ကိုတော့ နိုင်ဂျန်ဂါး အကြောင်းပြောလွန်းလို့ ဆိုပြီး ၊ ဆဲ ခံထိတော့မှာပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် ၊ အဘ မလဲ နိုင်ဂျန်ဂါး မှာနေမိနေတဲ့သူဆိုတော့ ၊ ဒါပဲပြောရတော့မှာပါပဲ ။
အဲဒီ နိုင်ဂျန်ဂါး ဆိုတာကြီးမှာလေ ၊
ကလေးလေးတွေ သွေးဖေါက်တဲ့အခါ ၊ သွေးကြောရှာတဲ့ ကိရိယာလေး ရှိတယ် ။
အဲဒီ ဓါတ်မီး လိုဟာလေးနှင် ထိုးကြည့်လိုက်ရင် ၊
ကလေးလေး ရဲ့ သွေးကြောတွေ အကုန်ပေါ်လာတယ် ။
ဈေးလည်း သိပ်မကြီးလှပါဘူး ။
အပေါ်က သဂျီးပြောတဲ့ ပြွန်.. လေဘော်လုံးကလေး သဘောကျတယ်
မိတ်ဆွေတွေထဲက ကလေးမွေးရင်လက်ဆောင်ပေးရမယ်..(တိုက်တိုက်တို့ ဆူးတို့ ချာတူးလန်တို့..ကိုပေါ့..
သမီးကို သိစေချင်လို့ ပြောချင်တဲ့အဖေရဲ့ ရင်တွင်းစကားတွေ
သမီးလေး အရွယ်ရောက်ရင် ဖတ်ခွင့်ရ ဖတ်နိုင်ပြီး ဒီအဖေ ဒီသမီး မေတ္တာခရီး ချစ်သဒ္ဒါတွေမညီးဘဲ ချစ်နိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်မိတယ်လေ။
ကို johnnydeer ရေ အခုလို ပို.စ်လေးက ကျွန်တော်ကို ခံစာရစေပါတယ်ဗျာ….
ကျွန်တော်လဲ နောက်ဆို အဲလိုတွေ တွေးပူရတော့မယ်..
ဘာလို.များ ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံဆေးရုံတွေ အဆင့်မမှီ လိုက်သလဲ ဗျာ… မွေးကင်းစ ဆို အသားဝါ ဖြစ်တယ်ဆို တာ ထုံးစံလိုကိုဖြစ်နေတယ်…
ကျွန်တော်မျိုးဆက်လေးကို ရောဂါကင်းအောင်ဘယ်လိုမွေးရမလဲ??????
ဆရာဝန်တွေ အမှားကြောင့် မခံစားရအောင် ဘယ်ဆေးရုံတက်မွေးရမလဲ??????
မွေးလူနာနဲ. မွေးကင်းစ ကို စနစ်တကျ ဂရုစိုက် တတ်တဲ့ ဆရာဝန် ဘယ်ဆေးရုံမှာထိုင်လဲ????
ရောဂါတစ်ခုခု ဖြစ်ရင် အဆင့်မြင့်နည်းစနစ်တွေနဲ. ကျွမ်းကျင် သူနာပြုတွေ ဘယ်မှာရှိလဲ?????
ဒီစာဖတ်မိရင် သမီးလေးလဲ မျက်ရည်ကျလောက်အောင် ၀မ်းသာသွားမှာပါ…
ကျမကိုမွေးတုံးကတော့ အဖေက ဆေးရုံမှာ တစ်ညလုံး မီးနေစောင့်ခဲ့ပြီး
မနက်ကျမွေးတော့ ဟင်း မိန်းကလေးဘဲ ဆိုပြီးပြန်သွားရောတဲ့…
အဲ့ဒါ ကျမတော့ ကြီးတဲ့ထိ အဖေ့ကိုပြောပြောပြီး စိတ်ဆိုးခဲ့ရတာ…
ဒါပေမဲ့ သမီးသုံးယောက်ထဲမှာ ကျမက အဖေ့အချစ်ဆုံးသမီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…
“”ပျော်ရွှင်ပါစေ အို သမီးလေးရေ။
ကျုပ် လဲ အဲဒီလို ပြောမလို့ 
တာမီးလေး မျင်ဒါနဲ့ …
ဦးဦး ဂျွန်နီဒီးယား ဂျီးကို ..
ဒက်ဒီဒီးယား တောင်ပလိုက်ချင်ဒေါ့ဒါဘဲ …
ဒက်ဒီဒီးယား နေကန်းလား .. (အစမ်းခေါ်ကျိဒါ)
ကောမန့်ပေးသူအပေါင်းအားလုံးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…တကယ်တော့ သမီးလေးက သနားတော့ သနားစရာပါ…မိဘတွေက သမီးဦးဆိုတော့ ဘာဖြစ်ရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သေချာမသိတော့ စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ ဘာဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက် လိုတာထက်ပိုခံခဲ့ရတယ်…ဆရာဝန်ဆိုလဲ ဟိုဆရာဝန်နဲ့ကုလိုက်…အဆင်မပြေလိုက်..ဒီဆရာဝန်နဲ့ ကုလိုက် အဆင်မပြေလိုက်နဲ့ အစမ်းသပ်ခံဖြစ်နေတာ….ငယ်ငယ်ကဆို ခဏခဏ နေမကောင်းဘူး…ခုမှ ကျန်းမာရေးကောင်းသွားတာ…သမီးလေးက ရုပ်ကသာ အမေနဲ့တူတာ..စိတ်ကတော့ ကျွန်တော်နဲ့တူတာ အများကြီး…အစလဲ ကျွန်တော်လိုပဲ အရမ်းသန်တယ်…တချိန်လုံး လိုက်စနေတာ…တကယ့် ငပြောင်မလေး…အားနေရင် ပါပါးကို မချစ်ဘူးဆိုပြီး လိုက်အော်နေတာ…ဟိုတနေ့ကမှ မူကြိုကနေ ကြိုပြီးအပြန် ကားပေါ်မှာ ဘာစိတ်ကူးပေါက်သလဲ မသိပါဘူး…ပါပါးကို မချစ်ဘူး လို့ပြောတာ တကယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး…ပိုးပိုး ကချစ်လို့စတာ ဆိုပြီး လာပြောတော့ စိတ်ထဲကြည်နူးပီတိဖြစ်လိုက်တာ…အော်…မိဘတွေများ သားသမီးနဲ့ ပတ်သက်ရင် တကယ့်အရူးတွေပါလားလို့…ယောက်ခမတော်ချင်သူတွေလဲ သတိထားနော်…သေသေချာချာ မကြည့်ပေးတဲ့ ကလေးဆရာဝန်တောင် အသားဝါ၀င်တာ အချိန်ကြာသွားလို့ မနည်းကုလိုက်ရလို့ သမီးထိဒါးကြည့်ဆိုပြီး ကားနဲ့လိုက်တိုက်ချင်နေတာ…သမီးသာ အရွယ်ရောက်လို့ ရည်းစားတွေရ…အိမ်ထောင်တွေများပြုလို့ကတော့ ဒီအဖေ ရူးမလားမသိဘူး…
ကိုဂျွန်နီ့ စာလေးဖတ်ရတော့ သားဦးအရူးဆိုတာ သတိရမိတယ်။
ကလေးက ရူးတာမဟုတ်၊ကလေးမိဘတွေက ရူးလောက်အောင် အရူးအမူးချစ်တာတဲ့။
တူမလေး အကြီးဆုံးတုံးကလည်း ဒီလိုပဲ။
ကလေး နှာခေါင်းတွေပိတ်ပြီး အသက်ရှူမရ နို့မစို့နိုင်ဖြစ်တော့ သူ့အဖေ (ကျမအကို)က မကြည့်ရက်တော့ပဲ ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပေးတယ်။
ဘေးက ကြည့်တဲ့ ကျမတောင် ပထမ အော့ကနဲဖြစ်သွားမိသေး။
ကလေး တစ်နှစ်လောက်မှာ ၀မ်းတွေချုပ်ပြီး သွားမရလို့ ငိုတော့ သူ့အဖေက လက်သန်းလေးကို နီဗီယာ ခရင်(မ)သူတ်ပြီဲး့ ကလော်ထုတ်ပေးရသေးတယ်။
(၀မ်းချူတဲ့ ဘောလုံးတွေလည်း မပေါ်သေးဘူး)
ဒါကြောင့်တူမလေးကို နီဗီယာ…. ဆိုပြီး နောက်ခေါ်မိသေးတယ်။
ကလေးတွေက အသားဝါတာ ABO incompatibilty ခေါ်တဲ့ အမေနဲ့ ကလေး သွေးအမျိုးအစားမတူရင် ပိုဖြစ်တတ်တယ်။
သာမာန်ကလေးတွေလည်း မနက်စောစော ၈-၁၀ နာရီကြား နေရောင်နုနုလေး ပြပြပေးရင် တော်ရုံ အသားဝါတာတော့ သက်သာပါတယ်။
အဘ ဒီတခါ မြန်မာပြည်လာရင် အဲဒီ ကလေး သွေးကြောရှာတဲ့ ကိရိယာဆိုတာ ၀ယ်လာပြီး ကလေးဆေးရုံ လှူပေးပါလား။
သမီးလေးရေ ကြီးလာရင် ဦးကြောင်နဲ့ တူတူပုန်းတမ်း ဆော့မယ်နော်….. အခုတော့ ဖေဂျီးမေဂျီးတို့နဲ့ နေလိုက်အုံးကွယ် ဦးကြောင် အားသေးဘူး….။
စ တင် ကတဲက ဖတ်လိုက်ရတယ်
သမီးလေး နဲ့ ပတ်သက်တာ စာ မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံလေးတွေ သိမ်းထားပေးပေါ့
အရွယ်ရောက်လာရင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လက်ဆောင်လေး ဖြစ်မှာ သေချာတယ်
သား သမီး နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ သားဦး မှ ရူးတာ မဟုတ်ရပါဘူး
မိဘ မေတ္တာမို့ သား သမီး အားလုံးအတွက် ရူးရတာပါပဲ
သားငယ် ၁ နှစ်သားလောက် မှာ မနက် ၂ နာရီလောက်
အပူတွေ ကြီး ပြီး မျက်ဖြူလန် တက်သွားလိုက်တာ
စိုးရိမ်မှုက အမြင့်ဆုံးကိုရောက် ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိက ဖြစ်
အဲဒီ အချိန်သားက ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဖြစ်နေ
ဘာပဲ လုပ်ရ လုပ်ရ လုပ်ဘို့ က အဆင်သင့်
သား သမီး ဇော အများကြီး မော ရပါတယ် ဗျာ
မိဘမေတ္တာကို ကိုယ်တိုင်ခံစားပြီး ရေးထားတာမို့ ရေးထားတာ အသက်ဝင်လိုက်တာ။
အရေးအသားရော အကြောင်းအရာပါ စွဲဆောင်အားကောင်းလွန်းလို့ အလွန်နှစ်သက်မိပါတယ်။
ကျမတို့ မောင်နှမတတွေလည်း ခင်ဖေချစ်တွေမို့ ခံစားနားလည်မိပါတယ်။
အဲဒီစာလေးကို သိမ်းထားပြီး သမီးကလေး ကြီးလာတဲ့အရွယ်
(တနည်းအားဖြင့် သူ့ဘ၀သူရပ်တည်ဖို့ မိဘရင်ခွင်က ခွဲထွက်မယ့် အချိန်မျိုး) မှာ
လက်ဆောင်ပေးလိုက်ရင် သူ့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအတွက် အကောင်းဆုံးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ရစေပြီး မိသားစုအပေါ်မှာ သိတတ်လိမ္မာစေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မိသားစုများအားလုံး ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ သာယာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။ :hee:
စာရေးတဲ့ညက သမီးလေးကို ဖက်အိပ်ရင်း စာရေးချင်တဲ့စိတ်တအားပေါ်လာလို့ ရေးဖြစ်သွားတာပါ….MaMa…nozomi…ဦးကြောင်ကြီး …padonmar…မဟာရာဇာ အံစာတုံး…မောင်ပေ …ခိုင်ဇာ…Ma Ei…ရွှေတိုက်စိုး …ခင်ခ…kyeemite …Foreign Resident…တောတွင်းပျော်…အရီးခင်လတ်…P chogyi …kai …နယ်လှည့် ၀ိဇ္ဇာ mobile (သူကြီးသမက်) တို့ပေးသော ကောမန့်များကြောင့် စိတ်ချမ်းသာ ပီတိ ဖြစ်ရပါကြောင်း…အားလုံးကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း…
ဟေ့လူဂျီး Johnnydeer ….
” မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု နှင့် ရွာ့ဘုရားပွဲ “ အတွက် …
လက်မှတ်လေး လာပေးတာပါဗျို့ ….
((ရောက်ပီးတား ဆိုလည်း နောက်တစ်ခေါက် ထပ်လာအုံး … ဒါဗျဲနော် …))
ကျုပ် လာရတာ မောတွားဘီ ….
ကျုပ်ကို ရေအေးအေးလေး တစ်ခွက်သောက်ဖို့ ပိုက်ဆံပေးလိုက်အုံး …
မပေးရင် မရရတာ မ,သွားမှာနော် …. ဒါဗျဲ …
ဒု – အတွင်းရေးမှူး